Kambani Kiredhiti uye Yako Kambani Mari Mamiriro
Kuti ugadzire bhizinesi rechikwereti, kambani yako ichaongororwa kubva pamakona akati wandei, ese anoita basa rakakosha mukumisikidza kambani chikwereti. Izvozvi zvatave kukurukura nezvebhizinesi rezvikwereti ekuzivisa, izvo zvaunofanirwa kuita kuti uwane yako yemakambani kiredhiti profiti uye kuti uchahwinhwa sei, rega tikurukure nezvekambani yako. Kunyanya, iwo ibhizinesi rako '
Yako Bhizinesi Bhangi Akaundi uye Kambani Kiredhiti Kiredhiti
Pamwe neapo iwe pawakaronga rako bhizinesi, iyo zera rebhangi account yako yakakosha kwazvo.Vanoongorora vanozofunga kuti iwe wakatanga kuitisa bhizinesi pawakavhura bhizinesi rekutarisa account. Kusvika pakukwereti kwekambani kunoenda, ndiro zuva rekuzvarwa rebhizinesi rako. Iyo yakareba iyo hukama iine yako bhizinesi rezvemari institution, zvirinani zviri izvo zviri zvechinangwa chekuvaka kambani yemakambani. Kana iwe uine hukama hwakareba neako bhizinesi bhizinesi, usachinje mabhangi.
Muchikamu chekutanga chegadziriro yebhizimusi yekugadzirira chikwereti, iwe unofanirwa kunge watoita chokwadi chekuti magwaro ako eakaundi kubhengi anoenderana neayo neiyo IRS, nyika yako yekubatanidzwa uye chero mamwe masangano ehurumende - zvakakosha kuti zita rako rebazi rifanane zvakafanana pane yega rekodhi .
Kudzora Bhizimusi Asset yeMari
Kana bhizinesi rako riine zvinhu, iwe unowana nyore kuwana capital uye chikwereti. Mimwe midziyo inogona kubvisirwa mari kana kutotengeswa chaiko kunoshanda mari. Nekuve nezvinhu zviri zvebhizinesi rako, iwe une mikana yakawanda yekubhadhara mari, pamwe nekuvhura masuo emazita akanaka uye kuti vangani vanokweretesa vaunogona kushanda navo. Unogona kutarisa zvimwe zveasset-yakavakirwa mari sarudzo pamwe nebhizinesi zvinhu.
Bhizinesi Revenue uye Imari Inoenderana Nechikwereti Kuongorora
Ehezve, rako bhizinesi rinofanira kuve rakaratidza mari uye kuratidza kugona kubata chikwereti. Kubhadhara panguva yakakodzera yebhizimusi mari inotsigirwa neyakaenzana bhizimusi mari. Vakweretesi vanofanirwa kuona kuti rako bhizinesi rine mari yakakwana kubhadhara bhizinesi rako zvikwereti uye mazwi.
Yako Bhangi Kuyera uye Maitiro Ako Anokanganisa Bhizinesi Chikwereti
Paunenge uchivaka bhizinesi kiredhiti, iwe unoda kuve neavhareji mashoma bhalansi yeinenge $ 10,000 yemwedzi mitatu yekupedzisira mune yako yekutanga bhizinesi kutarisa account. Vatengesi vanozotarisa yako emabhangi ratings uye vanoenderana iyo pamwe neyakafungidzirwa kugona kubata chikwereti. Chiyero chiri nyore kwazvo iwe une "Yakaderera, Pakati, Yakakwirira" chiyero cheiyo nhamba yemadhigiri muavhareji yako account yebhangi. Saka kana uine madhora chiuru, uri chiyero chiri “pasi 1,000”, uri pazasi pechikamu chemadhijiti mana. Dai iwe uine $ 4, iwe unenge uine "yakakwira 4" chiyero. Kuti ukwanise kuwana mari zhinji yebhizinesi, iwe unoda kuve neinenge "yakaderera 9,000" chiyero. Izvi zvinoreva kuti iwe une avhareji shoma bhalansi pamazuva makumi mapfumbamwe apfuura e $ 4. Izvi zvakakosha kuvaka bhizinesi kiredhiti uye mari haifanire kushandiswa, inongofanirwa kuve iriko kwemwedzi mitatu kuti uve ne "low 5" chiyero kubva kubhangi rako.
Inishuwarenzi uye Zvinogutsa Zvinoda Kukweretesa
Mazhinji mabhangi achada kuona akati wandei marudzi einishuwarenzi. Kunyangwe nezvose zvinodiwa pamusoro, kuchine chinhu chakakura icho chakakosha kune bhizinesi chikwereti. Kana bhizinesi rako riine mari, zvinhu uye rakasimba bhangi chiyero, ndiko kutanga kwakanaka kuratidza kuti iwe unogona kubata zvinotarisirwa mari. Pane mari isingatarisirwi iyo mabhangi nevakweretesi vanoziva yakakosha kupfuura bhizinesi chikwereti. Hutano hwako wega semuenzaniso, izvi zvichafanirwa kuve neinishuwarenzi usati wapihwa bhizinesi zvikwereti kubhanga. Inishuwarenzi yako yemotokari ichaongororwa zvakare, pamwe neinishuwarenzi yemutoro webhizinesi, nekuti vese vanoita chikamu chakakosha mubhizinesi rechikwereti mufananidzo. Vako vanokweretesa vanozoda kuwona yako yese yeinishuwarenzi uye vova nechokwadi chekuti zviitiko zvisingatarisirwi zvakafukidzwa usati wapihwa kiredhiti kune rako bhizinesi.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa munaGunyana 28, 2015